Bernard Riverside Apartment-Mgangatho ophantsi
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLucy
Indlu enamagumbi amabini okulala enefenitshala ngokupheleleyo kufutshane namanzi angasemva eVaduthala. Amagumbi okulala ane-air conditioning kunye ne-en-suite bathrooms. Le ndlu inegumbi lokuhlala elibanzi kunye nekhitshi elisebenzayo. Le ndlu ilungiselelwe ukuba ihlale ikhumbula iimfuno zentsapho.
Indawo enamagumbi amabini okulala kufutshane namanzi angasemva eVaduthala, eKochi.
Indlu eyakhiwe ngobumnandi ilungele iintsapho kunye namaqela ahambela eKochi.
Indawo yokuhlala ikufuphi ne-backwaters kunye ne-jetty yesikhephe eVaduthala.
Ipropathi ilungile ecaleni kwe-backwaters enendawo yeendwendwe zokuphumla. Iindwendwe zinokonwabela i-ambiance ye-backwaters ngexesha lokuhlala, indawo yegadi ekufutshane ne-backwaters inokufumaneka kwiindwendwe. Kukho umnatha omncinci osebenzayo waseTshayina wokuloba kwipropati. Ungahamba emanzini angasemva kwiphenyane elimisa i-jetty kanye ecaleni kwendlu yethu.
Indawo esihlala kuyo iseVaduthala, ihlomela-dolophu lesixeko saseKochi. I-Vaduthala inomgca we-backwaters ngobude bayo. Yenye yezona ndawo zinoxolo eCochin kwaye ingumthombo wokuziphilisa kwinani labalobi. Ukusondela kwizibhedlele ezifana ne-Amrita Institute of Medical Sciences, I-Aster Mediciyt kunye nesibhedlele saseLourdes senze le ndawo ibe yenye yezona ndawo zinqwenelekayo zokuhlala.
I-Vaduthala ixhumeke kakuhle kuyo yonke iCochin.
Umbuki zindwendwe ngu- Lucy
Ndingafumaneka ngalo lonke ixesha. Sihlala kwindlu yethu esecaleni kweflethi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kochi